Unemployed ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ဘယ်လို · MyWorld
Unemployed ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ဘယ်လို Schedule ဆွဲကြမလဲ?
01 Jul 00:00 by Theint Yadanar Oo
​အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လုပ်လာခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေထွက်ပြီး Career Break ယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ COVID ကာလအခြေအနေနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အလုပ်ကရပ်နားခံထားရတာပဲဖြစ်ဖြစ် အထူးသဖြင့် ဒီတစ်နှစ်တာရဲ့ကာလတွေကို ဖြတ်သန်းရတာ အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိကြမှာပါ။ နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ Daily Routine တွေ၊ Schedule တွေရပ်သွားတဲ့အခါ မယ်မယ်ရရလုပ်စရာမရှိဘဲ စိတ်လေလာတာ၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါကလည်း ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ COVID ရောဝါကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ဒီတော့ နောက်အလုပ်တစ်ခုမရခင် စပ်ကြားကာလ အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်တွေကိုမှာ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ဘယ်လို Schedule ဆွဲရမလဲဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေမျှဝေပေးသွားပါမယ်။
⏳ ကိုယ့်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ (7:30 AM)
အိမ်မှာနေရင်း Youtube ကနေ Workout Exercise တွေ၊ Yoga Exercise တွေရှာကြည့်ပြီး လွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ မနက်ပိုင်း 7:30 လောက်အိပ်ရာထပြီး 15 မိနစ်ကနေ နာရီဝက်လောက်ထိ လေ့ကျင့်တစ်ခုခုပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
⏳ ကိုယ်လက်သန့်စင်ရေချိုးပါ။ (8:00 AM)
မနက်ပိုင်းရေချိုးတာက ညနေမှချိုးတာထက် ကျန်းမာရေးအရကြည့်ရင် ကောင်းကျိုးတွေပိုများပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လန်းလန်းဆန်းဆန်း တစ်နေ့တာကိုဖြတ်သန်းနိုင်အောင် မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်ခန့်လုပ်ပြီးတာနဲ့ 8 နာရီလောက်မှာ ရေချိုးပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။
⏳ မနက်စာပြည့်ပြည့်ဝဝစားပါ။ (8:30 AM)
မနက်စာကို ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးလို စားပါဆိုတာကြားဖူးကြမှာပါ။ နေ့စဉ်အစာသုံးနပ်မှာ မနက်စာကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ ကောင်းမွန်ပြည့်ဝတဲ့ မနက်စာကိုသေချာစားထားမှ တစ်နေ့လုံး လုပ်စရာရှိတာလုပ်ဖို့အင်အားရှိနေမှာပါ။ 8:15 နာရီ ကနေ 8:30 ကြားကို မနက်စာစားတဲ့အချိန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားပါ။
⏳ Long Term Career အတွက် ပြင်ဆင်ပါ။ (9 AM - 12 PM)
9:00 နာရီကနေ 12:00 အထိအချိန်ကို အလုပ်လုပ်သလိုဘဲ သေချာ Focus ထားပြီးတော့ Next Career အတွက် ပြင်ဆင်သင့်တာတွေပြင်ဆင်ပါ။ CV/Resume, Cover Letter ကိုလည်း အမြဲ Update ဖြစ်နေပါစေ။ Job Hunting လုပ်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့ Company ကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်တာဖြစ်ဖြစ်၊ Recruitment Website (www.myworld.com.mm/jobs) တွေအသုံးပြုပြီး လျှောက်ထားဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်လျှောက်ဖို့သေချာတဲ့အလုပ်ဆိုရင် မလျှောက်ခင်မှာလည်း Job Detail, Job Description ကိုသေချာဖတ်စေလိုပါတယ်။ Industry Changes, Knowledge တွေလည်း မျက်ခြေမပျက်စောင့်ကြည့်နေပါ။ တစ်ဖက် Company တွေအကြောင်းကိုလည်း အချိန်ရှိတုန်းလေ့လာထားရင် Interview ဖြေတဲ့အခါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေမှာ အသေချာပါပဲ။
⏳ နေ့လည်စာစားပြီး အနားယူပါ။ (12 -2PM)
နေလည် 12 ကနေ2နာရီကို နေ့လည်စာစားပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ၊ စာအုပ်ဖတ်တာ ဒါမှမဟုတ် မျက်စိအနားပေးတဲ့အနေနဲ့တစ်ရေးတစ်မောအိပ်တာဖြစ်ဖြစ် အနားယူသင့်ပါတယ်။
⏳ Short Term Career အတွက် ရှာဖွေပါ။ (2-3PM)
အိပ်ရာနိုးလို့2နာရီကနေ3နာရီအထိကို တစ်နေ့ တစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီး အိမ်မှာနေရင်း မပျင်းရအောင် တစ်ဖက်ကဝင်ငွေလည်းရအောင် ကိုယ်တတ်ထားတာတွေနဲ့ Freelance ဒါမှမဟုတ် Part Time အနေနဲ့လုပ်လို့ရတာတွေ၊ Project တွေရှာဖွေကြည့်ပါ။
⏳ အသစ်တစ်ခုခုကိုသင်ယူပါ။ (3 -5PM)
COVID ကာလအိမ်မှာနေရတဲ့အခါ နာမည်ကြီး Education Platform တွေကနေ Free Certificate ရယူနိုင်မယ့် Course အများကြီးတင်ပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Google မှာရှာကြည့်ရုံနဲ့ အခမဲ့တက်လို့ရတဲ့ Online Resources တွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ အလုပ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ လိုအပ်မယ့် New Skill တွေကိုထပ်လေ့လာတာ၊ ကိုယ်တတ်ထားပြီးသားတွေကိုလည်း ပြန်ပြီး Polish လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေ့လည်3နာရီကနေ 5နာရီကို အချိန်တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီလောက်ပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Personal Growth/Career Growth အတွက် လေ့လာပြင်ဆင်ပါ။
⏳ Network and Socialize (After6PM)
တစ်နေ့လုံး Schedule အပြည့်နဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီးဆိုရင် ညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းကို မိသားစုနဲ့စကားစမြည်ပြောတာ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ Online ပေါ်မှာ စကားပြောပြီး Networking လုပ်ပါ။ အလုပ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ Networking ကအရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့အသိတွေ၊ Industry တူတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေဆီကနေလည်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ၊ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။
အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေက ကိုယ်တိုင်ကလည်း သေချာအချိန်သတ်မှတ်ပြီး Schedule နဲ့အညီလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ အိပ်ချိန်၊ စားချိန်မမှန်ဘဲ ကိုယ့်မှာအကျင့်ဆိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဖျောက်နိုင်ရပါမယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာ အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်မယ့် နည်းလမ်းတွေဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Source Reference - Business Insider
Career Break မှာရလာတဲ့ Depression ကိုဘယ်လိုကုစားကြမလဲ?
5 days ago by Hay Soe
5 days ago by Hsu Yee Lin
6 days ago by May Pwint Phyu
13 days ago by Iris Thiri
Smart ကျကျ အလုပ်ပြန်ရှာကြစို့
20 days ago by William Ko Ko
Interview အောင်မြင်စေမယ့် အချက် ၅ ချက်
27 days ago by Thant Zin